सस्तो स्टोभ, २०२१ मा कुन किन्न? थोरै पैसाको लागि तातो
स्टोभहरू हामीले राख्ने कोठाको तापक्रम बढाउने यन्त्रहरू हुन्। यसले हामीलाई सबैभन्दा चिसो समयमा न्यानो रहन मद्दत गर्दछ। स्टोभ को आधार मा धेरै प्रकार को छ ईन्धन प्रकार जुन हामीले तापक्रम बढाउन प्रयोग गर्छौं।
यस पोष्टमा हामी अवस्थित सबै प्रकारका स्टोभहरू र प्रत्येकका फाइदा र बेफाइदाहरू विश्लेषण गर्न जाँदैछौं। थप रूपमा, तपाईं मूल्यहरू जान्न र अधिक गुणस्तर र राम्रो मूल्य भएका सबै पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
जाडोमा तपाईंको घर तताउनको लागि उत्तम सस्तो स्टोभहरू
जाडोमा चिसो हुनबाट जोगिनका लागि यहाँ उत्तम स्टोभहरूको चयन छ। यी मध्ये कुनै पनि मोडेलहरूसँग तपाईं सफल हुनुहुनेछ किनभने तिनीहरू प्रयोगकर्ताहरूद्वारा रुचाइएका छन् र पैसाको लागि उत्तम मूल्य भएकाहरू हुन्:
Orbegozo BP 5007 -... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०962। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
ओर्बेगोजो बीपी 0102 - स्टोभ ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०253। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
Orbegozo BB 5000 - स्टोभ ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०432। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
कालो काठको चुलो... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०5। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
गोली चुलो १४ किलोवाट... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०3। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
AVANT AV7554 - स्टोभ ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०145। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	Orbegozo BP 5007 -...
मूल्य गुणस्तर	ओर्बेगोजो बीपी 0102 - स्टोभ ...
हाम्रो मनपर्ने	Orbegozo BB 5000 - स्टोभ ...
कालो काठको चुलो...
AVANT AV7554 - स्टोभ ...
को गोली स्टोभ तिनीहरूको राम्रो प्रदर्शन र दक्षताको कारण वर्षौंदेखि फैलिएको छ। यसको सञ्चालन अपेक्षाकृत सरल र सस्तो छ। स्टोभमा इन्धन भण्डारण गर्न ट्याङ्की छ, यस अवस्थामा, गोली। जब हामीले उपकरण सञ्चालनमा राख्छौं, एउटा स्क्रूले गोलीलाई दहन कक्षमा सार्दछ विद्युतीय नियन्त्रण प्रणालीले संकेत गरेको दरमा आगो निभाउन।
गोलीहरू जल्छन्, तातो र धुवाँ उत्सर्जन गर्दछ जुन बाहिरी चिम्नी जडान भएको पछाडिको आउटलेट मार्फत च्यानल गरिन्छ।
यदि तपाईं गोली चुल्हो गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्।
गोली स्टोभ हेर्नुहोस्
यसले प्रदान गर्ने फाइदाहरू मध्ये एउटा समय प्रोग्राम गर्ने क्षमता हो जसमा स्टोभलाई कोठामा तातो दिनको लागि खोलिएको छ र फेरि बन्द हुन्छ। यी स्टोभहरू बायोमास स्टोभसँग धेरै भ्रमित छन्, किनकि गोली छ एक प्रकारको बायोमास इन्धन। यो सानो सिलिन्डरको रूपमा कम्प्याक्ट गरिएको भुराबाट बनेको हुन्छ। सामान्यतया, दुई किलोग्राम पेलेटले एक लिटर डिजेलले उत्पादन गर्ने उस्तै ताप दिन्छ।
तिनीहरू आज उपलब्ध सस्तो स्टोभ हुन्। यसको इन्धन वनमा पाइने बायोमास हो। तिनीहरू जीवनकालको परम्परागत काठ जलाउने स्टोभमा आधारित छन्, तर लागू सबैभन्दा उन्नत प्रविधि। यसले यसको प्रयोगलाई थप सहज बनाउँछ र दहन अनुकूलित हुन्छ।
तिनीहरूको इन्धन पूर्णतया पारिस्थितिक र प्राकृतिक भएकोले, तिनीहरू वातावरणको लागि कम हानिकारक छन्। तिनीहरू सबैभन्दा प्राकृतिक र शुद्ध गर्मीको फाइदा लिनको लागि उपयुक्त छन्।
को काठ स्टोभ तिनीहरू सबैभन्दा परम्परागत छन्। यी उपकरणहरू हुन् जसले काठलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दछ। दाउरा रूखबाट प्राप्त हुन्छ। यसको सबैभन्दा दैनिक प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रको भान्साकोठामा हुन्छ, यद्यपि यसले गर्मी दिन र कोठाको तापक्रम बढाउन पनि काम गर्छ।
सामान्यतया, सबै काठको चुलोमा एउटा पाइप हुन्छ जुन चिम्नीमा समाप्त हुन्छ जसले दहनमा उत्पन्न हुने ग्यासहरूलाई बाहिर निकाल्छ र प्रदूषित हावा सास फेर्नको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
तिनीहरू प्रयोग गर्नका लागि सरल स्टोभहरू हुन् र ज्वालाले प्रस्ताव गर्ने अतिरिक्त घरको वातावरणको कारणले थप आराम प्रदान गर्दछ। आगो निभाउन चार घण्टा लाग्न सक्छ, तर यसले लगभग 20 घण्टासम्म गर्मीलाई राम्रोसँग राख्न सक्छ। करिब ९ घन्टा जलेको दाउराको चुलोले रातभरको लागि पर्याप्त तातो दिन्छ।
काठ स्टोभ किन्न इच्छुक हुनुहुन्छ? यहाँ तपाईंले तिनीहरूलाई सस्तो पाउनुहुनेछ।
काठ जलिरहेको चुलो हेर्नुहोस्
यदि तपाईं यसलाई लामो समयसम्म जलिरहन चाहनुहुन्छ भने प्रयोग गरिने दाउरामा थोरै मात्रामा आर्द्रता हुनुपर्छ। काठ जति सुक्छ, त्यति नै छिटो जल्छ।
त्यहाँ उत्पादन हुने गर्मीको फाइदा उठाउन र रोटी, पिज्जा, केही स्किवरहरू र रोस्टहरू जस्ता केही खानाहरू पकाउन ओभनको साथ काठको चुलोहरू पनि छन्।
को डिजाइन ग्यास चुल्हो तिनीहरूलाई अधिक दक्षता अनुमति दिन्छ। यस अवसरमा प्रयोग गरिएको इन्धन यो ब्युटेन ग्यास हो। तिनीहरू उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति हो। विगतमा प्राकृतिक ग्यास वा ब्युटेन ग्यास सिलिन्डर किन्न र प्रयोग गर्न मानिसहरू डराउने गर्थे।
यद्यपि, वर्तमानमा, यी प्रकारका स्टोभहरू धेरै सुरक्षित छन्। थप रूपमा, तिनीहरू प्रति महिना अतिरिक्त बचत उत्पन्न गर्न सक्षम छन् र हामी यसलाई कुनै पनि आपतकालीन समयमा प्रयोग गर्न सक्छौं।
ग्यास चुल्होहरू धेरै सस्तोको लागि बाहिर खडा छन्। यदि तपाईं उत्तम मूल्यहरूको फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने, हाम्रा प्रस्तावहरूलाई नछुटाउनुहोस्।
ग्यास चुलो हेर्नुहोस्
यसको सञ्चालन धेरै सरल छ। यसमा एउटा फ्रेम छ जहाँ ब्युटेन ग्यास सिलिन्डर राखिएको छ र बर्नर सक्रिय दहन कायम राख्नको लागि जिम्मेवार छ। प्रक्रियाको क्रममा, ब्युटेन ग्यास हावामा अक्सिजनसँग जलाइन्छ र कोठामा तातो प्रदान गर्दछ।
यी चुल्होहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग सार्न सकिन्छ (जबसम्म तिनीहरू बन्द छन्)। तिनीहरू साना कोठाहरू तताउनको लागि उपयुक्त छन्, किनकि यसले चाँडै गर्छ।
यी प्रकारका स्टोभहरू धेरै प्रसिद्ध छैनन्, तर तिनीहरू धेरै कुशल छन्। यो एक पोर्टेबल प्रणाली हो जसलाई कुनै पनि प्रकारको स्थापना र / वा मर्मतको आवश्यकता पर्दैन। यसको इन्धन तरल (प्याराफिन) छ र यसको दहन धेरै मौन छ।
यसको फाइदाहरू मध्ये एक कोठाबाट अर्को कोठामा ढुवानी गर्न सजिलो र यसको ताप गति हो। यसको अतिरिक्त, द्वारा उत्पादित गर्मी प्याराफिन स्टोभ यो एक बिजुली हीटर जस्तै केन्द्रित छैन, बरु यो कोठा वरिपरि धेरै राम्रो फैलिएको छ। यसले यसले प्रदान गर्ने सान्त्वनाको अनुभूति बनाउँछ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो उच्च क्यालोरी मूल्य र सुरक्षाको कारण प्याराफिन वा केरोसिन स्टोभहरू रोज्छन्। यदि तपाइँ प्याराफिन स्टोभ किन्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो प्रस्तावहरूको फाइदा लिनुहोस्।
प्याराफिन स्टोभ हेर्नुहोस्
अन्य स्टोभको खपतको तुलनामा, प्याराफिन स्टोभको खपत एकदमै कम छ।
को इलेक्ट्रिक स्टोभ तिनीहरू यन्त्रहरू हुन् जसले प्रतिरोधलाई तातो बनाउन र परिवेशको तापक्रम बढाउन बिजुली प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले सफा र शुद्ध तातो प्रस्ताव गर्छन्, किनकि यसले कुनै पनि प्रकारको उत्सर्जन उत्पन्न गर्दैन। कमजोरी मध्ये एक हो बिजुलीको बिल वृद्धि.
इलेक्ट्रिक स्टोभको प्रयोग लगभग व्यापक छ र तिनीहरू एक कोठाबाट अर्को कोठामा ढुवानी गर्न धेरै सहज छन् र यदि तपाईं यात्रामा जानुहुन्छ भने। यद्यपि, तिनीहरू बचतको हिसाबले राम्रो छैनन्, किनकि तिनीहरूले बारम्बार प्रयोग गर्दा बिजुलीको बिल धेरै बढ्छ।
समयमै कोठा तताउनको लागि विद्युतीय चुलो सधैं राम्रो खरिद हो। तिनीहरू सस्तो र कम वजन छन्, त्यसैले तिनीहरू कहिलेकाहीं प्रयोगको लागि उपयुक्त छन्।
बिजुली स्टोभ हेर्नुहोस्
यदि तपाईं एक वा दुई कोठामा तातो फोकस गर्न चाहनुहुन्छ र घरको सबै कोठाहरूमा तातो फैलाउन आवश्यक पर्दैन भने तिनीहरू आदर्श हुन्।
स्टोभ छनोट गर्दा खातामा लिने चरहरू
एक प्रकारको स्टोभ वा अर्को छनौट गर्न, धेरै कारकहरूलाई ध्यानमा राख्न महत्त्वपूर्ण छ:
पहिलो न्यूनतम लागतमा ताप उत्पादन गर्ने चुलोको क्षमता हो। सामान्यतया, चुलोमा जति धेरै पावर हुन्छ, त्यति नै इन्धन चाहिन्छ वा जति बढी बिजुली खपत हुन्छ (विद्युत चुलोको अवस्थामा)।
हाम्रो स्टोभको पर्याप्त क्यालोरी शक्ति जान्नको लागि, हामीले घरको कुल सतह जान्नुपर्दछ। शक्ति kW मा मापन गरिन्छ। प्रत्येक किलोवाट शक्ति 8 वर्ग मीटर तताउन सक्षम छ सतह को। त्यसकारण, यदि तपाईंको घर 80 वर्ग मीटर छ भने, 10 किलोवाटको शक्ति पर्याप्त हुनेछ।
तपाइँको अवस्थाको लागि कुन स्टोभ उत्तम छ जान्नको लागि, यो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने कोठा वा कहाँ स्थापना गरिने छ भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि मुख्य कोठा 30 वर्ग मिटर छ भने, हामीले 20 वर्ग मिटर भन्दा अलि बढी शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। स्टोभको प्रयोगलाई अनुकूलन गर्न, माथि उल्लेखित kW मा सन्दर्भ डेटा प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ।
स्टोभ को स्थान प्रदर्शन को एक निर्धारण कारक हो। यदि हामीले स्थापना गर्ने वा राख्ने कोठा सबैभन्दा न्यानो छ भने, हामीले यसलाई कम समय प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसको विपरित, यदि यो सबैभन्दा चिसो छ भने, हामीले स्टोभको खपत कम गर्न कोठालाई सर्त गर्नुपर्छ।
स्टोभको दक्षता बढाउनको लागि, विशेष गरी राम्रो इन्सुलेशन भएको कोठाको एक भागमा स्थान छनौट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, ताकि स्टोभको ताप पर्खाल वा झ्यालहरूबाट हराउन नपरोस्। सम्भावित आगोबाट बच्न पर्खाल र चुलो वा कुनै ज्वलनशील वस्तुको बीचमा लगभग 40 सेन्टिमिटर खाली ठाउँ छोड्नु महत्त्वपूर्ण छ।
हामीले स्टोभ राखेको कोठामा अत्यधिक गर्मी वा आगोको जोखिमबाट बच्न भेन्टिलेसन र धुवाँ निष्कासन प्रणाली हुनु एकदमै आवश्यक छ।
विन्डोज र इन्सुलेशन
यदि घरमा राम्रो इन्सुलेशन र डबल-ग्लाज्ड झ्यालहरू छन् भने, स्टोभले राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ। छोड्न नबिर्सनुहोस् लगभग 30-40 सेन्टिमिटरको अन्तर चुलो र जलाउन सक्ने कुनै पनि वस्तुको बीचमा।
स्टोभ कसरी छनौट गर्ने
एकचोटि ध्यानमा राख्नु पर्ने सबै चरहरू थाहा भइसकेपछि, हामी हाम्रो लागि कुन स्टोभ उत्तम छ भनेर छनौट गर्न सक्छौं।
काठ स्टोभहरू ती हुन् जसले उच्चतम प्रदर्शन ताप र सफा दहन प्रदान गर्दछ। तिनीहरू नवीकरणीय इन्धनमा चल्न सक्छन् जस्तै दाउरा काट्ने। थप रूपमा, तिनीहरूसँग सजावटी कारक छ जुन ज्वालाले हामीलाई प्रदान गर्दछ। यसले हामीलाई त्यो घरेलु वातावरण दिन सक्षम छ जुन हामीले खोजिरहेका छौं। हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने सजावटमा अनुकूलन गर्न धेरै मोडेलहरू छन्। यसको फाइदाहरू मध्ये हामी यो फेला पार्छौं सायद कुनै काम चाहिन्छ। तिनीहरूलाई धुवाँ आउटलेटको लागि मात्र बाहिर जडान चाहिन्छ।
अर्कोतर्फ, स्टिल सामग्री र दुर्दम्य सामग्रीले बनाइएका चुल्होहरू दाउराभन्दा ठूला ठाउँहरू तताउन तयार हुन्छन्।
यदि तपाइँ छिटो तर कम चिरस्थायी गर्मी चाहनुहुन्छ भने, स्टिल सामग्रीबाट बनेको स्टोभ छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाइँ अधिक शक्तिशाली र लामो समय सम्म चल्ने ताप चाहानुहुन्छ, तर सुरुमा ढिलो, काठ, बायोमास वा गोली चुलोको लागि रोज्नुहोस्।
सर्वश्रेष्ठ स्टोभ ब्रान्डहरू
प्रत्येक प्रकारको दाउराको लागि त्यहाँ ब्रान्डहरू छन् जसले राम्रो प्रदर्शन र अधिक कुशल स्टोभहरू प्रस्ताव गर्दछ।
काठ स्टोभका लागि हामी प्रमुख ब्रान्डहरू फेला पार्छौं जस्तै Rocal, Carbel, Hergom र Bronpi।
पेलेट स्टोभहरू जस्ता प्रसिद्ध ब्रान्डहरू छन् Lacunza, Ecoforest, Bronpi र Edilkamin।
ग्यास चुलोको रूपमा हामीले शक्तिशाली ब्रान्डहरू फेला पार्छौं DeLonghi र Orbegozo।
प्याराफिन स्टोभका लागि हामीसँग राम्रो गुणस्तर / मूल्य अनुपात जस्तै ब्रान्डहरू छन् क्लिमा, वेबर र कायमी।
बिजुली चुलोमा धेरै प्रकारका ब्रान्डहरू छन्, किनभने तिनीहरू अधिक व्यावसायिक छन्। हामी जस्तै उत्कृष्ट ब्रान्डहरू फेला पार्छौं Orbegozo, Clatronic, Rowenta, Klarstein, Thermic Dinamics, DeLonghi र Taurus।
यस जानकारीको साथ तपाईले आफ्नो अवस्थाको लागि कुन स्टोभ उत्तम छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र सबै फाइदाहरूको आनन्द लिँदै तापमा सकेसम्म धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
1 जाडोमा तपाईंको घर तताउनको लागि उत्तम सस्तो स्टोभहरू
2 स्टोभका प्रकारहरू
2.1 तातो पम्प संग पोर्टेबल एयर कंडीशनर
2.3 कम खपत रेडिएटरहरू
2.5 काठ स्टोभ
2.6 बायोएथेनोल स्टोभ
2.7 गोली स्टोभ
2.8 काठ स्टोभ
2.9 ग्यास चुल्हो
2.10 प्याराफिन स्टोभ
2.11 इलेक्ट्रिक स्टोभ
3 स्टोभ छनोट गर्दा खातामा लिने चरहरू
3.1 पोटेन्शिया क्यालोरीफिका
3.2 कोठा आकार
3.5 विन्डोज र इन्सुलेशन
4 स्टोभ कसरी छनौट गर्ने
5 सर्वश्रेष्ठ स्टोभ ब्रान्डहरू